kufamba ndega kana muboka rakarongeka - ndosarudza ipi? | Absolut Kufamba
Susana godoy | | vamwe
Wakambozvibvunza here kana iyo famba wega kana muboka rakarongeka? Zvakanaka, zvinofanirwa kutaurwa kuti uyu mubvunzo uyo hausi nyore kupindura nguva dzose. Kupfuura chero chinhu nekuti mairi tinowana mbiri sarudzo dzakasarudzika uye nezvakanakira pamwe nekuipira.
El kufamba Zvinogona chete kuve chiitiko asi kufamba muboka rakarongeka hakusi kumashure kumashure. Naizvozvo, kana tisina chokwadi, zvakanaka kuti tiongorore zvese zvakakosha, tisati taita sarudzo yekupedzisira. Iwe unoda kusarudza kamwechete uye zvachose? Isu tine mhinduro!
1 Kufamba wega: Zvakanakira nekuipira
1.1 Zvakanakira kufamba wega
1.2 Kukanganisa kwekufamba wega
2 Kufamba muboka rakarongeka: Hongu kana kwete?
2.1 Zvakanakira kufamba muboka
2.2 Kukanganisa kwekufamba muboka
3 Kufamba ndega kana muboka rakarongeka?
Kufamba wega: Zvakanakira nekuipira
Zvakanakira kufamba wega
Pasina kupokana, rimwe remakomborero makuru ekufamba wega ndewekuti iwe unayo rusununguko rwakawanda kusarudza. Kune rimwe divi, mune nyaya yemapurogiramu uye kune rimwe divi, zvakare munzvimbo dzauri kuzoshanyira. Nekuti kunyangwe iwe ukatakura zvakawanda kana zvishoma izvo zvaunoronga kuita, zvirongwa zvinogona kugara zvichichinjwa paminiti yekupedzisira uye izvi zvinokupa iyo rusununguko rwatataura. Uye zvakare, sezvo zvese zvichimhanya paaccount yako, ichokwadi kuti iwe unogona kuchengetedza mari yakanaka kana uchisarudza kwairi kuenda, kuronga rwendo irwo, mahotera, nezvimwe.
Kukanganisa kwekufamba wega
Kune vanhu vazhinji vane iyo tsika yekufamba wegaIvo havana zvipingaidzo sekudaro. Asi kana isu tichifanira kuratidzira chero, ndeyekuti isu tinofanirwa kuronga rwese rwendo. Saka inogona kuve chikamu chakanyanyisa. Sezvo zvichatitorera nguva yakareba uye pamwe, dzimwe nguva isu tinotokanganisa mukusarudza hotera kana zvimwe zviitiko zvechibvumirano. Asi kana urwu rudzi rwe 'ruzivo' rukaitika, iri zvakare anecdote yekuwedzera kuhupenyu hwedu. Kune vakawanda, kuva vega zvakare ihondo yekukwira kana kumwe kunetseka kuchiitika, nekuti tinenge tisina rubatsiro.
Kufamba muboka rakarongeka: Hongu kana kwete?
Zvakanakira kufamba muboka
Imwe yenyaya huru ndeyekuti iwe uchasangana nevanhu vatsva, saka ichave zvakare imwe yenguva dzakanakisa dzerwendo. Kune rimwe divi, kana iwe ukaenda kune dzimwe nyika uko mutauro unogona kunge uri dambudziko, iro boka rinenge risisina kudaro. Nekuti pachagara paine mutungamiriri kana murongi werwendo irworwo anozotarisira zvese. Kana zvisiri, pakati pevamwe vako, zvirokwazvo pane mumwe munhu anozvidzivirira. Iwe une chengetedzo yakawanda, nekuti kunyangwe zvese zvikafamba mushe, kana kana dambudziko rikamuka, iwe unogara wakakomberedzwa nevanhu. Saka muzviitiko zvese izvi, zvinogona kunge zviri kuti zvese zviri nani. Zvakare, chii chakanyanya kunaka pane kugovana nhambo huru dzehupenyu hwedu? Kune rimwe divi, isu hatifanire kukanganwa kuti hatifanire kuronga chero chinhu uye inguva nemusoro zvatino chengetedza. Kunyangwe pamwe urwu rudzi rwerwendo rwakabatanidzwa nepfungwa yekuti nderwevanhu vechikuru chete, hapana chimwe chiri kumberi kubva pachokwadi, nekuti vechidiki uye vazhinji vari kutangawo pariri.
Kukanganisa kwekufamba muboka
Kune ruzhinji, imwe yeakanyanya Kukanganisa kwekufamba muboka rakarongeka ndeyekuti iwe unofanirwa kutevedzera marongero uye nekushanya kwese kuri mu 'kuronga'. Saka kune vanhu vazhinji iko kunetsekana kutora nguva yakatarwa kana iwe uchida kuve wakawanda zvakanyanya. Dzimwe nguva mamwe mapoinzi ezuva anononoka. Nekuti hazvina kufanana kuronga vanhu makumi matatu pane kungoenda vaviri chete. Nekudaro, iyo nguva yenguva nyaya ndeimwe yekukanganisa mune ino kesi. Pachave pasina nguva yekuvandudza uye zvakare, tichava nevanhu veese mazera. Saka zvichagara zvichidikanwa kuenderana navo vese. Pamusoro pekuti rwendo rwerudzi urwu runowanzo dhura nekuti tinoenda nezvose zvakarongeka uye zvinoreva kubhadhara izvo 'zvekuwedzera'
Mushure mekuona zvese zviri zviviri zvakasarudzika uye kuwedzera zvakanakira pamwe nezvazvinokanganisa, hapana chakafanana nekutora stock. Zviri pachena kuti ichagara ichienderana nezvinodiwa zveumwe neumwe. Nekuti kana iwe uchida kubhadhara zvishoma asi uchikanganwa nezvekuronga, kutenga matikiti uye chengetedza, zvino chinhu chakanakisa iboka rakarongeka. Ehezve, sechiitiko chehupenyu, pamwe kufamba wega kunogara kuri sarudzo yakanaka. Pamusoro peizvozvo iwe unogona kusarudza kugadzirisa uye kumisikidza iwo marongero ayo iwe chete aunosarudza.
Sezvauri kuona, isu hatigone kukurudzira kufamba uri wega kana muboka rakarongeka, nekuti ichagara ichitsamira pane zvaunofarira kana zvaunoda. Asi isu tinogona kukuudza kuti, kana kamwe chete, edza zvese zvingasarudzwa. Nekuti mune zvese uchawana zvakanakira izvo zvakakodzera kuti unakirwe. Kana paine chakaipa chikaonekwa, saka zvirokwazvo isu tichazokwanisa kuzvigadzirisa nenzira inopfuura inoshanda. Uye ndeupi waungasarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kufamba ndega kana muboka rakarongeka?